Man City Oo Qorsheeneysa Inay U Dhaqaaqdo Soo Xero Galinta Xidig Ka Tirsan Kooxda Napoli – Gool FM
(Premier League) 23 Abriil 2018 Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay sameyso saxiix cusub ay ku dooneyso inay ku xoojiso safka kooxdeeda si ay ugu diyaar garoowdo dagaalka sugaya xili ciyaareedka soo aadan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Sky Blues ay wada hadalo la furatay khadka dhexe kooxda Napoli Jorginho, waxayna doonayaan in ay xili ciyaareedka soo aadan ay kasoo dajiyaan Etihad Stadium.
Wariyaha caanka ah ee dalka Spain ee Jose Alvarez Haya ayaa wuxuu xaqiijiyay in agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Manchester City Txiki Begiristain uu kulan la qaatay wakiilka xidiga reer Talyaani isbuucii lasoo dhaafay.
Xidiga asal ahaan kasoo jeeda dalka Brazil balse qaatay dhalashada dalka Talyaaniga ayaa wuxuu soo jiitay xili ciyaareedkan dhamaan indhaha kooxaha waaweyn ee yurub, kadib bandhiga cajiibka ah uu ka sameeyay kooxdiisa Napoli, isagoo u saftay 34 kulan wuxuuna ilaa iyo haatan u dhaliyay 3 gool.
Macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa rajeenaya in Jorginho uu imaan doono safka kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda si uu u noqdo badalka 32 jirka xulka qaranka Brazil Fernandinho.
Giorinho, oo 26 sanno jir ah, ayaa ku biiray Napoli afar sano ka hor, isagoo 8.5 milyan ginni kaga soo dhaqaaqay kooxda Verona.
Ciyaartoyda Bayern Munich oo ka sii digay in Real Madrid ay firinbi ku reebto